चमेरो किन उल्टो झुन्डिन्छ ? – Milappost
चमेरो किन उल्टो झुन्डिन्छ ?
काठमाडौँ- हलिउड फिल्मका सबैभन्दा फेमस क्यारेक्टर ब्याटम्यानका बारेमा को परिचित नहोला ? ब्याटम्यानको फिल्म हेरेपछि चमेरोको बारेमा जान्न तपाईलाई अत्याधिक मन लाग्यो होला ।
चमेरो धेरैजसो अध्यारो ठाउँमा रुखका हाँगा तथा गुफाहरुमा उल्टो झुन्डिरहेको हुन्छ । तपाई चमेरो किन उल्टो झुन्डिन्छ भन्ने बारेमा जान्न कौतुहलता पनि भयो होला ।आखिर किन उल्टो झुन्डिन्छ त चमेरो ? किन सिधा बस्दैन ? आज हामी तपाईलाई यस रहस्यको बारेमा जानकारी दिनेछौँ । चमेरो स्तनधारी जीव मध्ये एक मात्र त्यस्तो जीव हो जो उड्न सक्दछ ।
संसारभरमा १ हजार भन्दा धेरै चमेरोका प्रजातीहरु पाइन्छन् । ति मध्ये केही चमेराहरु यस्ता पनि छन्, जसले रगत पिउँदछन् । त्यसैले उक्त प्रजातीको चमेरालाई ‘पिशाच चमेरो’ भन्ने गरिन्छ । वैज्ञानिकहरुले पनि चमेरो आज भन्दा १० करोड वर्ष पहिला अर्थात् डायनोसरको समयमा धर्तीमा रहेको बताएका छन् ।
आजसम्म पनि चमेरो धर्तीमा छ । चमेरो उल्टो झुन्डिँदा सहज तरिकाले उड्न सक्दछ । बाँकी पंक्षीभन्दा चमेरो जमीनबाट उड्न सक्षम हुँदैन । किनभने चमेरोको प्वाँख जमिनबाट त्यति उडान भर्न सक्दैन । साथै चमेराको पछाडी पटिको खुट्टा छोटो हुन्छ र पूरा विकसित भएको हुँदैन ।
त्यसैले चमेरोले जमीनबाट दौडेर उडानको गति समात्न सक्दैन । साथै चमेराको खुट्टाको नसा यति व्यवस्थित हुन्छ कि उसको सबै तौल पञ्जालाई बलियो बनाउने किसिमको रहेको हुन्छ ।- एजेन्सीको सहयोगमा